Ọrụ Nkwado Ala maka Inwe Reallọ
Gịnị bụ Ala Ntụkwasị Obi?
Nkwenye ala bụ akwụkwọ anyị mepụtara nke na-enye gị ohere ijide ihe onwunwe naanị gị ka aha gị apụtaghị na aha ahụ na ndekọ ọha.
Yak idọhọ ke odụk ubomisọn̄ abiat. I nwere mkpuchi ego $ 1. Ma ị kụrụ onye na-ere ahịa ngwaahịa & ị ga-agba akwụkwọ maka $ 3 nde. Ọ bụrụ n ’inwere ụlọ gị na akụrụngwa itinye ego n’aha gị, onye ọka iwu na-agba akwụkwọ ị ga-ahụ ụlọ gị na akụrụngwa ọ bụla ọzọ na ndekọ ọha. Ọ bụrụ na inwere ụlọ, ọ na - egosi nkwụsi ike ego yana ọka iwu ga - enwe ike itinye akwụkwọ ikpe ahụ.
Onye ọka iwu na-emegide ya nwere ike ịkwado sheriff ozugbo n'ihu ụlọ gị, kpọọ n'ọnụ ụzọ gị mgbe ị na-eri nri abalị ma nyefee gị ikpe gị n'ihu ndị agbata obi gị niile. Agbanyeghị, mgbe inwere ụlọ gị na ntụkwasị obi nke ala, a ga-ezobe gị. Ekwesighi itinye akwụkwọ ntụkwasị obi gị na ndekọ ọha. Ọ na-eme ka inwe nke gị nkeonwe. Ọ dịghị onye kwesịrị ịma na ị bụ ụlọ gị ma ọ bụghị gị.
Gini bu Land Trust?
Ala ntụkwasị obi nwere ihe anọ: Nọmba 1 bụ onye nhazi. Nke ahụ bụ gị n'ihi na ọ bụ gị nwere onye mepụtara ntụkwasị obi ahụ. Nọmba 2 bụ onye nlekọta ụlọ ya. Ntụkwasị obi na-egbochi njikwa Onye Nkwado n'okpuru usoro ntụkwasị obi. Nke a nwere ike ịbụ nwanne nwanyị ma ọ bụ ọgọ, ezigbo enyi ma ọ bụ onye ezinụlọ. Iji bulie nzuzo gị, ọ kacha mma ịhọrọ onye na-enweghị aha ikpeazụ gị. Ntụkwasị obi niile chọrọ onye nlekọta ma site n'ụdị ntụkwasị obi a, ntụkwasị obi na-ekwupụta ikike ha. Nọmba 3 bụ onye na-erite uru. Nke ahụ bụ onye na-enweta uru nile nke ntụkwasị obi ahụ. Nke ahụ bụ gị (ma ọ bụ otu onye ma ọ bụ karịa ndị mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ị kpọrọ).
Ndị erite uru nwere ike ịnwe njikwa niile. Ndị na-erite uru nwere ike iduzi mgbe a zụtara ma rere ala. Tụkwasị na nke a, onye ga-erite uru bụ onye nwere ike ịhazigharị ihe ahụ ma ọ bụ nwee ike ịnakọta ego mgbazinye site na njirimara itinye ego. N'ikpeazụ, nọmba 4 bụ isi nke ntụkwasị obi. Corpus bu isi obodo ma obu isi (ihe bara uru) n'ime ntukwasi obi.
Uru nke Land Trust
Ihe dị ukwuu bụ na uru ụtụ isi niile dị elu na-adị na akọ. Site na ntụkwasị obi ahaziri nke ọma, mgbe ị na-ere ụlọ gị, uru ụtụ ga-adịgide. Ọ bụrụ na ị bi n'ụlọ ahụ maka abụọ n'ime afọ 5 gara aga, ị gaghị akwụ ụtụ isi na uru mgbe ị na-ere ihe ruru $ 250,000 nke uru maka otu onye ma ọ bụ $ 500,000 maka di na nwunye, mgbe ahaziri nke ọma.
Ihe ị rụzuru bụ nzuzo nke inwe.
Gịnị Ka Ndị Na-agbazinye ego Ga-ekwu?
Iwu Garnet - St Germain Depository Institutions Act nke 1982 nyere mmadụ ohere itinye ihe onwunwe ya n'ụdị ntụkwasị obi ala nke anyị na-ezo aka na ya na-enweghị mmalite nke ire ere ahịa. Nke ahụ pụtara na mmadụ nwere ike ịnyefe ihe mgbazinye ego na ntụkwasị obi ala na-enweghị nnabata site na ụlọ akụ. Nke a bụ ikpe ma ọ bụrụhaala na onye ahụ gbaziri ego ga-erite uru, ngwongwo ahụ nwere ihe na-erughị ụlọ obibi ise, a ga-eweghachi ntụkwasị obi ahụ ma ghara inyefe ndị ọzọ ikike nke ibi.
Ebe nchekwa Garn-St Germain
Iwu ụlọ ọrụ nke 1982
ISI NKE 12> ISI NKE 13 § 1701j-3
§ 1701j – 3. Mwepu nke mmachibido iwu na-ere ere
(d) Mwepu nke nnyefe ma ọ bụ nkwupụta akọwapụtara
N'ihe gbasara ego mgbazinye ụlọ nke ejiri aka na ụlọ obibi nke nwere ihe na-erughị ụlọ obibi ise, gụnyere nkwekọrịta na ngwaahịa e kenyere ụlọ obibi na ụlọ ọrụ na-akwado ụlọ, ma ọ bụ na ụlọ obibi arụpụtara, onye na-agbazinye ego nwere ike ọ gaghị jiri nhọrọ ya mee ihe dabere na nkebi iwu a na-ere ere na ya—
(8) mbufe n'ime ntukwasi obi na ntukwasi obi nke onye gbaziri ego ma burukwa onye na erite uru na nke na emetutaghi mbufe ikike nke ibi na ihe onwunwe; …
(inter vivos trust = Ntụkwasị obi etinyere n’oge ndụ onye biri ya. Onye bi ebe a bụ onye nwere ntụkwasị obi nke emepụtara. trustdị ntụkwasị obi nke Ala na-atụ maka ya bụ ntụkwasị obi n'etiti vivos.)
Ebee ka m nwere ike iji ntụkwasị obi ala?
Ndị mmadụ na-eji ntụkwasị obi ala na steeti iri ise niile. Fọdụ iwu steeti anaghị ekwu hoo haa maka ntụkwasị obi ala mana ndị mmadụ na-eji ha na steeti niile. Fọdụ ndị na-ehie ụzọ site n'ịsị, "Etinyeghị ntụkwasị obi ala na iwu nke steeti m, yabụ na iwu adịghị ha." Ọfọn, olee ebe iwu kwuru na mmadụ nwere ike ịkpụ akpụkpọ ụkwụ uhie? Rụọ ọkwá na sofa? Na-a fromụ site na ahịhịa ọka? Ọbụghị ihe niile anyị na - eme bụ ịkọzigharị akwụkwọ iwu. Iwu nkịtị, ka o megide statutory iwu, bụ otu esi atụgharịrị iwu na omume ndị ọzọ a na-ahụkarị n'ime ọtụtụ afọ. Atụmatụ ego bụ akụkụ nke iwu nkịtị nke anabatara n'ogologo ọtụtụ narị afọ ọ gwụla ma enwere iwu iwu megide ha. Enweghị iwu, dịka nke ederede a, na nke ọ bụla n'ime steeti 50 US nke na-emegide mmegide nke ntụkwasị obi ala.
Akụkọ gbasara ikpe ụlọ na ụlọ
Otu n’ime ndị ahịa anyị nwere onye agbata obi ya na-agagharị n’ihu otu n’ime ụlọ ha. Ọ gbajiri nkwonkwo ụkwụ ya, merụọ ọbara ọbara wee nwụọ. A gbara ha akwụkwọ maka ihe niile ha nwere karịa ihe mkpuchi ha nwere ike ikpuchi. A sị na ha mere otu ihe nwere ala na ntụkwasị obi ala nke nwere ike ọ gaghị eme. Ọ bụghị na ntụkwasị obi na-ewepu ibu ahụ. Ọ bụ na, otu anyị si hazie ntụkwasị obi ala gị, ọ nweghị onye kwesịrị ịma na ị nwere mmasị na njide ihe-akụ kama gị. Yabụ, ọ bụ ihe omimi banyere onye ọka iwu ga-agba akwụkwọ. Ha ga-emefu nnukwu ego iji chọpụta ma ọ bara uru ịgba gị akwụkwọ.
Otu n'ime ndị ọrụ anyị n'ọfịs anyị zụtara ala mbụ ọ na-akpata na steeti Washington. Ọ bụ ụlọ na-agbaji 6-ụlọ. O goro ndị ọrụ ngo ka ha mezie ya. Mana con-traktọ ahụ ghọrọ onye aghụghọ. Ọ banyere n'okwu ikpe nke were afọ 4 wee rie ya $ 157,000. A sị na ọ mere naanị otu ihe nke aka ya na ntụkwasị obi ala, kama ịbụ aha nke ya. nke ahụ agaraghị eme. Kama nke ahụ, ndị mmegide ahụ hụrụ na o nwere ụlọ na ihe onwunwe itinye ego, yabụ ha kpebiri ịgba akwụkwọ.
Yabụ, ntụkwasị obi ala gị inwe ihe onwunwe gị nwere ike inye gị nzuzo iji kpuchido gị ịhapụ ụlọ nke gị, ụgbọ ala gị, akaụntụ akụ gị yana ịnwe 25% nke ego ị ga-enweta n'ọdịnihu ga-achọta maka afọ 20 sochirinụ. Ọzọ, ya, naanị ya, abụghị ngwaọrụ nchedo akụ. Ebumnuche ya bụ ichebe ụlọ gị pụọ n'anya anya. Kama ijide aha gị na aha gị ka mmadụ niile hụ, ọ na - egbochi gị na ndị na - enweghị ezigbo mmasị gị. Yabụ, ọ nwere ike belata ohere nke ịgba akwụkwọ ịgba akwụkwọ megide gị.
Inclọ ọrụ kpọọ ụlọ ọrụ iji soro onye nnọchi anya ha kwuo okwu. Mgbe ị nyechara iwu, anyị ga-ezitere gị akwụkwọ nyocha ntụkwasị obi ala gị. Will ga-mezue ajuju ajuju ma were ya na faksị laghachi ya. A ga-akwadebe akwụkwọ gị. A ga-emepụta ọrụ ntụkwasị obi, nke dị ihe dịka peeji 12. Debe nke a na kọmpụta faịlụ gị n'ụlọ ma ọ bụ na igbe nchekwa. A ga-akwadebe akwụkwọ ikike a, inyefe ihe onwunwe gị site na aha gị na ntụkwasị obi gị. Edere akwụkwọ a na ụlọ ọrụ ndị na-edekọ ihe na mpaghara mpaghara na mpaghara ebe ihe onwunwe ahụ dị. A ga-etinye ọrụ nke akwụkwọ ọmụrụ nwa bara uru, nke na-enyefe ụlọ ọrụ, onye ma ọ bụ ntụkwasị obi dị ndụ bara uru ma ọ bụrụ na ịhọrọ nhọrọ a n'efu.
Emelitere ikpeazụ na Septemba 21, 2020
Obughi Ohere Mkpa Mmekorita
Ibi Ndụ vs. a Uche